အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး | Infinite-Electronic.hk
ယုတ္တိဗေဒ - Buffer, ယာဉ်မောင်း, receiver, transcei
embedded - FPGAs (ကွင်းဆင်း programmer ဂိတ် Array)
embedded - CPLDs (Complex programmer Logic ဖုန်းမျ
ဒေတာကိုသိမ်းယူမှု - ဒစ်ဂျစ်တယ် Potentiometers
နာရီ / အချိန် - clock Buffer, ယာဉ်မောင်း
integrated circuits (ICS),101 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
RFID Transponders, Tags:
RF Direct Coupler
RF / IF နှင့် RFID,31 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
transistors - programmer Unijunction
transistors - IGBTs - Array
Thyristors - DIAC, SIDACs
discrete Semiconductor ထုတ်ကုန်များ,26 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
Cable ကိုဆွဲထုတ် switch
Pushbutton switch - ခန်းမ Effect
navigation switches, Joystick တို့
Configure လုပ်လို့ရတဲ့ပြောင်းလဲမည် Components - မှ
Configure လုပ်လို့ရတဲ့ပြောင်းလဲမည် Components - အလ
Configure လုပ်လို့ရတဲ့ပြောင်းလဲမည် Components - ဆက
Configure လုပ်လို့ရတဲ့ပြောင်းလဲမည် Components - ခန
switches,24 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
အပူချိန်အာရုံခံ - အပူထိန်းကိရိယာ - စက်မှု
အပူချိန်အာရုံခံ - NTC Thermistors
optical အာရုံခံ - Photoelectric, စက်မှုဇုန်
Image ကိုအာရုံခံ, ကင်မရာ
sensors, Transducers,62 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း (RF) Relay
I / O Relay မော်ဂျူးများ - Input
I / O Relay မော်ဂျူးများ - အင်နာလော့
relays များ,14 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
connectors, Interconnection,147 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
လေဆာ Diodes, မော်ဂျူးများ - ဆက်စပ်ပစ္စည်း
စက္ခုဗေဒ - အဝေးမှဖော့စဖရပ်အလင်းရင်းမြစ်
စက္ခုဗေဒ - ရောင်ပြန်
စက္ခုဗေဒ - မှန်ဘီလူး
အယ်လ်အီးဒီ - နဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်, လူကြိုက်များ
LED Lighting - အရောင်
မီးခွက်ကို - အလင်းထုတ်မှု, နီယွန်
ဖိုင်ဘာစက္ခုဗေဒ - attenuation
display, Monitor - Interface ကို Controller
display bezel, မှန်ဘီလူး
optoelectronics,38 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
resistors,7 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
ညှပ်, Variable Capacitors
Mica နှင့် PTFE Capacitors
လျှပ်စစ်နှစ်ချက်အလွှာ Capacitors (EDLC), Supercapa
လူမီနီယမ် Electrolytic Capacitor
လူမီနီယမ် - Polymer အမျိုးအစား Capacitors
capacitors,14 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
pin Configuration / selection လှို
crystals, လှို, ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု,8 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
Transformers,8 အမျိုးအစား အားလုံးအမျိုးအစားရှုမြင် >
ကေဘယ်ကြိုးတွေ, ဝါယာကြိုး connectors, Interconnection discrete Semiconductor ထုတ်ကုန်များ inductors, coil, သီး integrated circuits (ICS) memory card, မော်ဂျူးများ optoelectronics power supply - ဘုတ်အဖွဲ့တောင်မှာ
High Quality ထုတ်ကုန်များအပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်စျေးနှုန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Express ကိုဖြန့်ဝေOne Stop, အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
အဆိုပါကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများ၏ Professional ကအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး
သင်ရှာနေတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတွေ့မြင်ကြဘူးလျှင်, ငါတို့သည်တုံ့ပြန်မှုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလိမ့်မည် Info@Infinite-Electronic.hk ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ
integrated circuits (ICS) အတွက်အထူးပြုဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ချိ, RF / IF နှင့် RFID, အာရုံခံ, Transducers, Switch, Relay, Capacitors, optoelectronics နှင့်သမ္မာသတိ Semiconductor ... အဘယ်ကြောင့် Us?
100% နယူး & Orininal အာမခံHigh Quality နှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အဝယ်ရန် one-Stopရရှိနိုင်သောအနိမ့်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့သင်္ဘော
100% နယူး & Orininal အာမခံ
High Quality နှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေး
PMIC, မှတ်ဉာဏ်, Logic, Linear, Interface, နှစ်မြှုပ်ထားသော FPGAs, CPLDs, microprocessor, Microcontroller တွေ, resistors, Capacitors, Switch, အာရုံခံ, Transducers, RF / IF: ကျနော်တို့ integrated circuits (ICS) ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြန့်ဖြူးများမှာ နှင့် RFID, Semiconductor မော်ဂျူးများ, relay နှင့်အခြားအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို။
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်အမှတ်တံဆိပ်: Semiconductor, Zilog, Intel Honeywell, Panasonic Broadcom, Omron, Sharp က, KEMET, AVX ON Xilinx, Altera, Microsemi, microchip, ရာဇမတ်ကွက်, Texas Instruments, STMicroelectronics, Infineon, NXP, လုပျသငျပေါင်းစည်း, ထင်းရူးပင်, Fairchild, , TE ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ပိုမို ...	တစ်ဦး Quote Get
ATSAME70N19B-CN CM7,512KB FLASH,256KB SRAM,BGA10 2.954 အသေးစိတ်
STA321 IC AUDIO SYSTEM DGTL 4CH 64-LQFP 1.571 အသေးစိတ်
TAS3103ADBT IC DGTL AUDIO PROC 38-TSSOP 2.609 အသေးစိတ်
PIC16LF87-I/P IC MCU 8BIT 7KB FLASH 18DIP 0.912 အသေးစိတ်
AT89C51RC2-SLRUM IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44PLCC 2.795 အသေးစိတ်
CY7C1613KV18-300BZI IC SRAM 144M PARALLEL 165FBGA 85.108 အသေးစိတ်
SN74AHC1G126DCKT IC BUF NON-INVERT 5.5V SC70-5 0.125 အသေးစိတ်
DS4M125D+33 IC OSC CLOCK 125MHZ 10-LCCC 6.359 အသေးစိတ်
AD5522JSVDZ IC PPMU 80TQFP 22.578 အသေးစိတ်
BA-2RV219-D68 SWITCH SNAP ACTION SPDT 20A 125V 7.309 အသေးစိတ်
AH1684619-A SWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V 0.334 အသေးစိတ်
151ML1-E1 SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 120V 291.016 အသေးစိတ်
TL5012-1110SM TL5012-1 110VAC 2NC+1NO STD. ACT 156.056 အသေးစိတ်
8534MZQE2 SWITCH PUSH SPST-NC 1A 120V 1.583 အသေးစိတ်
NP8S3L203QE SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 32V 6.1 အသေးစိတ်
A10505RNCQE SWITCH ROTARY 5POS 2.5A 125V 1.398 အသေးစိတ်
MB05L2NCGD SWITCH ROTARY 5POS 250MA 125V 4.324 အသေးစိတ်
D4SL-NSK10-LK SLIDE KEY KIT D4SL-N 138.825 အသေးစိတ်
2450CM 86750003 MANUAL RESET THERMOSTAT 4.112 အသေးစိတ်
NTCASCWE3102J THERMISTOR NTC 1KOHM 3528K STUD 0.649 အသေးစိတ်
EX-F61-PN SENSOR LEAK DETECT 12-24VDC PNP 82.343 အသေးစိတ်
PH-2-90M ELECTRODE UNDERWATER DUAL 90M 266.799 အသေးစိတ်
MAX86140ENP+T IC SENSOR OXIMETER/HEARTRATE 1.58 အသေးစိတ်
TSDP34356 IC IR RCVR MODULE 57.6KHZ 0.217 အသေးစိတ်
E6F-AG5C-C 360 2M ROTARY ENCODER OPTICAL 360PPR 204.701 အသေးစိတ်
MLX90333EGO-BCH-000-TU SENSOR LINEAR ANALOG/PWM 16TSSOP 3.565 အသေးစိတ်
DRV5055A2QDBZT HALL SENSOR 0.402 အသေးစိတ်
PN7360AUHN/C300Y IC RFID READER 13.56MHZ 64VFQFN 2.033 အသေးစိတ်
MFRC50001T/0FE,112 IC MIFARE READER 32SO 2.904 အသေးစိတ်
JN5169-001-M03-2Z JN5169-001-M03-2 ZIGBEE 3.0, ZIG 7.449 အသေးစိတ်
RC2500HP-RC232 LOW COST - GENERAL PURPOSE 2400- 3.908 အသေးစိတ်
CC-WMX-L96C-TE-1 MOD WI-I.MX6 89.949 အသေးစိတ်
S171AH-2450S RF ANT 2.4GHZ WHIP TILT RP-SMA 4.57 အသေးစိတ်
HMC327MS8GE IC RF AMP WLL 3GHZ-4GHZ 8MSOP 4.705 အသေးစိတ်
MAX2373ETC+ IC AMP GP 850MHZ-940MHZ 12TQFN 0.767 အသေးစိတ်
CA15-9-ADP ADAPTER DE15-DE9 GLOBAL 3.984 အသေးစိတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်အမှတ်တံဆိပ်: Semiconductor, Zilog, Intel Honeywell, Panasonic Broadcom, Omron, Sharp က, KEMET, AVX ON Xilinx, Altera, Microsemi, microchip, ရာဇမတ်ကွက်, Texas Instruments, STMicroelectronics, Infineon, NXP, လုပျသငျပေါင်းစည်း, ထင်းရူးပင်, Fairchild, ,
Infinite-Electronic.hk ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြန့်ဖြူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လျင်မြန်စွာသူတို့ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာလိုအပ်သည့်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုကူညီရှာဖွေပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း
ငါတို့သည်သင်တို့ ICS ၏ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများထံမှနောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးအပါအဝင်ထုတ်ကုန်များ၏အရှိဆုံးပြည့်စုံအကွာအဝေး, အာရုံခံ, Transducers, Switch, Relay, optoelectronics နှင့်သမ္မာသတိ Semiconductor ပူဇော်ဖို့ဂုဏ်ယူကြသည်။ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား
သင်ရှာနေတဲ့အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကို, ကို Message ပေးပို့သို့မဟုတ် Info@Infinite-Electronic.hk မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါမမြင်မိပါဘူးလျှင်, ငါတို့သည်တုံ့ပြန်မှုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးမည်။ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Rohm 10 မော်တော်ယာဉ်ဆစ် mosfets ဖြည့်စွက်"ဟုအဆိုပါ SCT3xxxxxHR စီးရီးများ၏နိဒါန်း Rohm AEC ကို-Q101 အရည်အခ...
sponsored အကြောင်းအရာ: SIGLENT SVA1015X Spectrum Analyzerအဆိုပါ SIGLENT SVA1015X ရောင်စဉ် Analyzer9kHz ကနေ 1.5 GHz အမြန်နှုန်း...
APEC: TI 15mW ရပ်တည်ချက်ဖြင့်အတူ AC-DC chip ကိုအောင်နောက်ပိုင်းတွင်ထင်"တန်ခိုး-ထောက်ပံ့ရေးအရွယ်အစားကျုံ့အနေဖြင့်ဤစက်ပစ္စည...
Dengrove Recom ကနေအာကာသ-saving, DC / DC က converters အဖြစ်ဖြည့်စွက်သူတို့ကအမြင့်ဆုံးအာဏာကိုသိပ်သည်းဆနှင့်မြင့်မားသောစ...
APEC: ဆစ်အာဏာနှင့်တိုးတက်လာသော cloud-based ပါဝါ tools များရှာရန်စွမ်းရည်တိုးတက်ခဲ့ကြနှင့်သဟဇာတ devices များနှင့်...
Power ကတံဆိပ်ခေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြတ်တောက်မှု PSUs စောင့်ကြည့်ဖို့အိမ်ရှင် CPU ကိုအဘို့အလိုနှင့်တစ်ဦးကိုကိုးကားဒီဇိုင်းကိုဖြည့်စွက်ဟုအမည်ပေးထားသည့် '' အာဏာကိုတံဆိပ်ခေါင်းများ '' (- အဲဒီမ...
လာမည့်နှစ်တွင်ဒီနှစ် 14% ကျဆင်းနှင့် 27% ကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်ထား semi ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများသုံးစွဲမှတ်ဉာဏ်ကဏ္ဍတွင်တစ်ကျဆင်းမှုများကတွန်းအားဖြစ်စေ, ထိ...
pi နေ့: စစ်တမ်းအသုံးပြုမှုကိုအမှုပေါင်းထုတ်ဖော်ပြသဖြေဆိုသူသုံးပုံတစ်ပုံသူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီမံကိန်းမျ...
Hi-rel application များအတွက်ပထမဦးဆုံးစစ်တပ်အရည်အချင်းပြည့် ARM processorLS1046A တစ်ဦး 1.8GHz Quad-Core ARM Cortex-A72 နှင့်အတူ NXP ရဲ့ 64-bit နဲ့လက်...
Mems ဖိအားအာရုံခံကိရိယာဝတ်စရာဘို့ဆပ်ပြာနှင့်ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုရှောင်ကိုခေါ် LPS33W, အ IPx8-rated device ကို ပြည်တွင်းရေး viscous potting ဂျယ်...
နယူး & Orininal အာမခံချက် 100%, အားလုံးကုန်ပစ္စည်းများသည် 1 နှစ်အာမခံ။ Orininal, ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှင့်အတူ High-အရည်အသွေးအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများ။
အကောင်းဆုံးအလုပ်ကျွမ်းကျင်မှု, လျင်မြန်စွာဖြေဆိုသူ, Fast သင်္ဘော & Delivery ။ အခုတော့အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ကို RFQ Send, ကျနော်တို့က 24 နာရီအတွင်း reply ပါလိမ့်မယ်။
မဆိုပေးထားထိုအချိန်တွင်ကျော် 2.000.000 အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများစတော့အိတ်အတွက်သာရရှိနိုင်နှင့်ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနချုပ်ထံမှသင်္ဘောများရန်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုရှာပါရန်ခက်ပေးဝေနေ, Long ကခဲအချိန်, အဆုံး-of-ဘဝ (EOL) နှင့်ပေါရာဏအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများနေကြသည်။
ကျနော်တို့မဆိုအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် Quote Beat မယ်! သင်က သာ. ကောင်း၏ Quote လက်ခံလျှင်။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသင့်အကောင်းဆုံးကိုးကားတွေ့ဆုံသို့မဟုတ် Beat မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါလိမ့်မယ်ပေးပါ။